April 17, 2021 Xuseen 4
Puntlandtimes (LAASCAANOOD)-Dagaal beeleed hubaysan, ayaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay Ceelka Dhabar-dalool, oo koonfur kaga beegan degmada Duddun ee Gobolka Sool, waxaana dagaalka ka dhashay khasaaro dhimasho & dhaawac ah.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Baaq Nabadeedu diray Beelaha ay dirirtu ku dhex mareyso Ceelka Dhabar-dalool, Maamulka Gobolka Iyo Hay’adaha Amnigana faray Inay tallaabo Adag ka Qaadaan Cidkasta Oo Nabadda kasoo horjeeda.
Hoos Ka Akhriso Qoraal kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha Soomaliland.
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay Ceelka Dhabar-dalool ee Degmada Xudun oo dhacda waqooyi barri ee gobolka Sool.
Dagaalkaas oo ka kacay Ceel-biyoodka Dhabar-dalool ee Degmada Xudun, wakhtigan maaha macquul in la daadiyo dhiigga dadka muslinka ah, sidaa awgeed waxa aan ugu baaqayaa kuwa colaadda hurinaya inay ka waantoobaan oo ay u tudhaan dadkooda maatida ah ee aan waxba galabsan iyo aakhiradooda, iyadoo weliba lagu jiro bishii barakaysanayd ee Ramadaan oo ah bil cibaado.
Madaxweynaha Somaliland wuxuu ugu baaqayaa waxgaradka, waayeelka, culimada iyo aqoonyahanka labada dhinac ee dirirtu dhexmarayso inay xasilooni ku soo dabbaalaan xaaladda, dhexdana u xidhaan sidii loo joojin lahaa khasaaraha uu sababay dagaalka beelaha walaalaha ah oo dhawaan uun muddo dheer ka dib heshiis ku gaadhay degaanka Adhi-cadeeye oo ay xubno ka mida golaha wasiiradu bilo u fadhiyeen sidii heshiis loo gaadhi lahaa, balse nasiib daro ay labadii beelood dib ugu dirireen ceel-biyood shalay.
Sideedaba colaad wiilbaa ku dhinta ee wiil kuma dhasho, madaxweynuhu wuxuu si adag u tilmaamayaa in aan loo dulqaadan Karin colaad sokeeye oo sidan u khasaare badan inay ku soo noq-noqoto deegaamada gobolka Sool,
Madaxweynuhu waxa uu ciidamada qaranka, maamulka gobolka iyo dhammaanba hay’adaha kala duwan ee xukuumadda amrayaa inay tallaabo dawladnimo ka qaadaan colaadaasi soo noq-noqotay, cid kasta oo u hoggaansami-wayda nabadda iyo samahana tallaabo ku habboon ka qaadaan.
Sidoo kale Madaxweynuhu wuxuu shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ee nabadda iyo samaha jecel u soo jeedinayaa inay gacan ka geysataan daminta colaadaasi iyo joojinta dhiig danbe oo ku daata dirirtaa.
Ugu danbayna waxa uu madaxweynuhu tacsi u dirayaa ehelada dadkii ku naf waayey dagaalkaasi, waxaanu u ducaynayaa intii ku dhaawacan tahay in Alle caafimaad ka siiyo waxyeelada ka soo gaadhay dagaalkaasi.
Ina Gaylanoow maxaad masawirka Muse iyo Dani aad cinwaanka uga dhigtay dagaalka Xuddun ka socda?
Ma waxaad uga jeedda in dagaalkaasi u dhaxeeyo PL iyo SL? Mase waxaad uga jeedaa in dagaalsan Dani uu hurinaayo?
Waxaa tahay Ibliis u baahan in bisha Ramadaan ummadda laga xiri, sida Ilaahay shaydaanka bishan barakaysan u xiray.
Aniga oo aan siyaasadaynayn masiibada ka dhacday Xuddun area, Allaha Weyna ii abuurin qof ku farsa bini-adamka kale dhibkooda macaa gaalo, waxaan u soo jeedin lahaa oday “HILLAAC” oo sheegta madaxweynaha SSC inuu wax ka yidhaahdo oo baaq diro dhibka ama masiibada ka dhacday gobolkiisii ee Soomaali oo dhan yaabka ku jirto. Hillaaca waxaan kaa sugaynaa dagaalada mandaqadda ku soo noqnoqonaya sababtooda, iyada oo aanad siyaasadayn dhinac kalana wax ka fiirin, gobolka Sool maxaa ka si ah, dhibkan goorma dhammaanaya
Waxaan aaminsanahay in lagasoo hayaamay hilaadihii cinwaannada Puntland vs Somaliland loo xiisoon jiray.
Zamanku waa isqayiraa, siyaasaddu waa isrogrogtaa, danuhuna waa isbeddelaan, dadkuna waa digarogtaa.
Illaahay waa bil Ramadan ee hakala qaboojiyo walaalaha meeshaa sheydaanku isku dirayo, dadka Somalida dhibka haysata ayaa ah inay dhammaan xeryaan yihiin, ay ku yar yihiin resources ku, Biyo, Baad, Shaqo, Kaabayaasha Nolosha, noloshaa adaggi waxay illowsiisay Somalida; islaamnimadii, derisnimadii, dulqaadkii, dadka nafta ayey dirqi ku sidaan 80% dadka Somaida ee ku nool shanta Somaliyeed saddex wakhti maalintii wax ma cunaan, markaasaa qaad iyo mukhadaraad u dheer yahay ay wakhtiga xun isku illowsiiyaan. Bayadda ay ku nool yihiin baana ugu wacan dhibka jira oo dhan. Kuwo dhiigga ku macaasha ayaa jira oo mago iyo xaqniin ku shaqaysta. Nin nabadoon ah oo reer Burco ah ayaa laga hayaa, inta Nin shaxaaday, ” Adeer waxba ma hayo, oo beryahan belo Allah ha badee, inamadii beeshu waxna ma dilin, waxna lagama dilin”
Markaa maanta Xuddun berina waa meel kale oo dhulka Somalida ka mid ah, waxaan aad uga xumahay ehelkii, hooyooyinka, caruurta , ooryooyinka ama xaasaska raggaa la leynayo ka baseen, cuqdada , cadhoda, aanada meesha ka dhalan doonta ayaan la qiyaasi karin ee reeraha ku baaba’aya. Allow adiga ayaan ku weydiinaynaa inaad dadka wax ka reebto